Blog – Jaawwii.org
Posted byBakakkaa Bonaa 11th Jan 2021 11th Jan 2021 Posted inUncategorizedLeave a comment on Rakkoon Gaanfa Afrikaa eenyu?
Posted byBakakkaa Bonaa 18th Dec 2020 18th Dec 2020 Posted inUncategorizedLeave a comment on Qabsoon Bilisummaa Lubbuu Qaalii Wareeguu Gaafata!!!Muddee 18, 2020.
Posted byBakakkaa Bonaa 8th Dec 2020 8th Dec 2020 Posted inUncategorizedLeave a comment on
Injifannoo WBO Zoonii lixaa Cibraa Odaa Bulluq !
WBOn Zoonii Lixaa Cibraan Odaa Bulluq Humni addaa Sulula Fincaa’aa tarkaanfii guyyaa har’aa 07/12/2020 amma galgala kana sa’aa 1:05 irratti humna diinaa 3F tokkoon Keellaa Warshaa Shukkaaraa Sulula Fincaa’aa irraa gara magaalaatti Baatuutti galuuf deemtu irratti fudhateen injifannoo ajaa’ibaa galmeessisee jira.
Haaluma kanaan Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo tarkaanfii laalessaa humna diinaa 3F tokko irra nama 15n tatee jirtu guutumma guutuuti barbaadeesuun konkolaachisaa 3F Sanaa nama Tasfaayee jedhamu madoon adabuun gumaa Qeerroo lama kaleessa Guduruutti humna Shiftaa kanaan ajjefamanii dachaa dachaan baasee jira.
Gumaa ilmaan Oromoo baasuun itti fufa!
Bilisummaan dhiigaa keenyaan dhufa!
Posted byBakakkaa Bonaa 7th Dec 2020 7th Dec 2020 Posted inUncategorizedLeave a comment on Injifannoo WBO
Lolaa mootiin hin argamne kan kaaba impaayera Itoophiyaatti eegalamee gidduu sabaaf sablammiin seenuu hin qabaan
Lollii Teediroosiif yohannis akka xumurameen miniliik darbee Oromoyaa weeraruu eegalee, osoo kaabatti minilikiif Yohannis wal diddaa agarsiisaa turanii garuu oromiyaa waliif qabuun waloon duula irratti banaan. Kanaanis dursanii osoo lollii minilikiif yohannis hin xumuramiin dura Yohannis horroo guduruu yoo weeraree qabatuu minilik immoo abbichuuf jiddaan weeraraan qabatee.
Ammaas lolli yeroo kana kaaba itoophiyaatti adeemaa jiru kun osoo hin xumuraminiyyuu humni waldorgomaan lama oromiyaa irratti olaantummaa agarsiisuuf waldhabaa jiru. Lollii kun kan abbaan injifate Oromoo irratti aangoo isaa muldhisuudha. Walaloon asii gadii kuniis kana muldhisaa.
Ilmi oromoo tokkolleen lola kana keessa seenuun oromiyaa cabsuuf tumsa kennuu hin qabu. Inumaa oromiyaa dhuunfachuf qofaa oromoon hiriiruu qaba.
Posted byBakakkaa Bonaa 7th Dec 2020 7th Dec 2020 Posted inUncategorizedLeave a comment on Lolaa mootiin hin argamne kan kaaba impaayera Itoophiyaatti eegalamee gidduu sabaaf sablammiin seenuu hin qabaan
Cibraa Odaa bulluuq!!✊
Injifannoo WBO zoonii Lixaa Cibraa Odaa Bulluq! (Sadasaa 06, 2020)
Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo guyyaa har’aa Sadaasa 06, 2020 Lola humna Shiftaa Abiyyi bobbaase waliin gaggeesseen injifannoo galmeessiseera.
Haaluma kanaan Humna Shiftaa Abiyyi kan uummata dararuuf 80 taatee bobbaatee WBOtti dhaqte irratti tarkaanfii laalessaa WBOn Cibraa Odaa Bulluq Buttaan Eebantuu Muraasni Gaara Weennii Aanaa Haroo Limmuu Magaalaa Gabaa Ayyaanaa Ganda Uuchaa jedhamutti fudhateen 4 battalumatti yommuu ajjeesu 5 madoo dandammii hin qabneen adabee gara dhuftetti deebiseera.
Diina Oromoo darartu Oromiyaa keessaa baasuun hanga bilisummaatti itti fufa!
Posted byBakakkaa Bonaa 6th Dec 2020 Posted inUncategorizedLeave a comment on Cibraa Odaa bulluuq!!✊
Galiin Qabsoo Bilisummaa Oromoo Oromiyaa walabaa ijaruudha!
Qaamni Impaayera Itoophiyaa Tiksee Boritti Tarkaanfachiisuuf Carraaqu Joobira Walabummaa Oromiyaan Butamee Dhabama Ta’a!
Mudde 6, 2020.
Biyya keenya Oromiyaa impaayeraan liqimfamtee jirtu walaba baasuuf galaana impaayeraa gogsuun fardiidha. Galaanni impaayera kun yeroo ammaa kanatti raafama guddaa keessa seenee hundeen urgufamaa jira, Yeroonni gogee dhabama ta’us fagoo miti. Haala kana keessatti yaatota galaana ka ta’aan hedduun irraa dhaabbatanii galaanicha humna dhowwachuun madda galaanichaa dhabama taassisaa jiran.
Finxaaleyyiin leellistoota impaayera itoophiyaa martinuu gufuufi farreen mirga hiree murteeffannaa sabootaati. Akka ilaalcha finxaaleyyii impaayeraatti mirgi hiree murteeffannaa sabootaa; Biyya diiguu, Nageenya booressuufi shororkeessummaadha. Haatahu malee, Mirgi hiree murteeffannaa mirga uumaan uumamaan nama maraaf waan nama ta’eef kenneefidha. Saboonni dammaqiinsa qabaatuun waa’ee mirga hiree murteeffannaa ofii hubatan haga waan akeekan dhaqqabanitti gatii irraa barbaadamu kafaluu duuba hin jedhan. Kanaaf ammoo fagoo deemuu osoo hin taane asuma impaayera itoophiyaa keessattuu haqni kun addeessa caalee ifee mul’ata.
Posted byBakakkaa Bonaa 6th Dec 2020 6th Dec 2020 Posted inUncategorizedLeave a comment on Galiin Qabsoo Bilisummaa Oromoo Oromiyaa walabaa ijaruudha!
PPn midhaan gargaarsa uummataaf deemu karaatti saamuu hojii godhatee jira
Gujii bahaa aanaa Gumii eldallootti midhaan gargaarsa uummataaf dhufee kaabineen PP waliigaluun tasaabii 3 gurguraa jedhanii shuferoota ajajuun uummata dhowwataan
Waggaa sadiif walitti fufiinsaan qabeenya uummataa gubuu, ooyiruu qotee bulaa daaressuuf barbadeessu irraatti kan fuulleeffatee PPn uummata beelessuun harka kennachiisuuf karoora baafate hojiitti hiikaa jira.
Haala kanaanis uummanni oromoo 50% ol wabii midhaan nyaataa dhabuun eeggattummaa jalaatti kufee jira. Midhaan nyaataa uummata beela’ee akka dhaqqabuuf deemaa turee konkolaataa wal harkisuu 3 karaatti ugguruun gurgursiisuun saamicha gaggeessaniiru. Akka maddeen keenya godiina gujii bahaa irraa nu dhaqqabeetti!
Posted byBakakkaa Bonaa 6th Dec 2020 6th Dec 2020 Posted inUncategorizedLeave a comment on PPn midhaan gargaarsa uummataaf deemu karaatti saamuu hojii godhatee jira
Irree fi gaachannii Uummaata Oromoo WBOn Godina Gujii Lixaa Aanaa Bulee Horaa Ganda Roggichaa iddoo addaa Haroo adaamaa jedhamutti Cibraan Madda Albuudaa Buttaa Malkaa Sooddaa loltuu mootummaa garboonfataa Toophiyaa maqaa WBO sakkaata’uuf bobba’ee gaafa guyaa 5/12/2020 guyyaa keessaa sa’aatii 8:00 irraatti tarkaanfii fudhateen lama(2) yoo ajjeesuu Saddet(8) madoon adabeera.
Lolli hanga bilisummati.
Posted byBakakkaa Bonaa 6th Dec 2020 6th Dec 2020 Posted inUncategorizedLeave a comment on Injifannoo WBO
Ajjeefamuu Jaal Galaanaa Immaanaan kan walqabatee
Dhimmi Ajjeefamuu Galaanaa Immaanaa Maaliif Dhoksamee Hafee?
• Galaanaa Immaanaa yakka hojjetee osoo hin taane, Sababa ilaalcha siyaasaaf Akka ajjeefamuuf kan murteessan dhalattoota Dirree Incinnii paartii mormituu fakkaatanii tika mootummaa ta’anii hojjechaa jiran Paartii ABO-gamtoomee jedhanii warra of waaman, General Hayiluu Gonfaatiin Ambo keessatti ijaaramanii Tokkummaa Qeerroo Amboo Ololaan diiguu basaasanii hiisisuuf caasaa tika Bilxiginnaa maqaa dhalattoota Waddeessaa jedhuun Hayiluu Dalasaa fi Guddataa Dinqaatiin sochii Qeerroo Amboo cabsuuf warra Abiy irraa dirqamni itti kennameen waan ajjeefameef hanga ammaatti reenfi Galaanaa Immaanaa akka dhokatu taasifamee jira. Uummanni Oromoo bal’aan hanga ammaatti dhimma ajjeefamee lagatti gatamuu Galaanaatiin wal qabatee gaaffii guddaa keessa kan jiran yoo ta’u, Galaanaa Immaanaa dabalatee namni kudhan (10)n mana hidhaa Amboo keessaa baafamanii akka ajjeefamanii jiran poolisoonni quuqama oromummaa qaban heeruu nuuf kennanii jiru.
Dhumarratti dhaamsin Ani uummata Amboo fi Naannoo isheetiif dabarsuu barbaadu maatiin hidhamtoota siyaasaa yeroo yeroon ijoollee ykn nama isin duraa hidhamee jiru akka hordoftan jechuun barbaada. Gumaa qabsaa’ota keenyaa ni baafna.
Posted byBakakkaa Bonaa 6th Dec 2020 Posted inUncategorizedLeave a comment on Ajjeefamuu Jaal Galaanaa Immaanaan kan walqabatee